DataNumen: Inqubomgomo Yamakhukhi
Ikhukhi ucezu oluncane lombhalo amawebhusayithi aluthumela esipheqululini futhi alugcina endaweni yokugcina yomsebenzisi, okungaba yikhompyutha yomuntu siqu, iselula, ithebhulethi, njll. Lawa mafayela avumela iwebhusayithi ukuthi ikhumbule imininingwane ngokuvakasha kwakho, njengezilimi nezinketho ozikhethile, ezingenza ukuvakasha kwakho okulandelayo kube lula futhi kwenze isiza sisebenziseke kakhulu kuwe. Amakhukhi adlala indima ebaluleke kakhulu ekwenzeni ngcono okuhlangenwe nakho komsebenzisi kuwebhu.
Ama-cookies asetshenziswa kanjani?
Ngokudlulisa amehlo kule webhusayithi wamukela ukuthi singafaka amakhukhi emshinini wakho futhi usazise imininingwane elandelayo:
Imininingwane yezibalo ekusetshenzisweni kwewebhu ngumsebenzisi.
Ifomethi ekhethwayo yokufinyelela kuwebhu kusuka kumadivayisi eselula.
Ukusesha kwakamuva kwezinsizakalo zewebhu nezinsizakalo zokwenza idatha ngokwezifiso.
Imininingwane mayelana nezikhangiso eziboniswa kumsebenzisi.
Ukuxhumeka kwedatha kumanethiwekhi omphakathi wabasebenzisi, ukufinyelela ku-Facebook noma ku-Twitter.
Izinhlobo zamakhukhi ezisetshenzisiwe
Le webhusayithi isebenzisa zombili i-temporaramakhukhi weseshini namakhukhi aqhubekayo. Amakhukhi eseshini agcina imininingwane kuphela lapho umsebenzisi angena kwiWebhu namakhukhi aqhubekayo agcinwe kudatha yokugcina ukuthi afinyelelwe futhi asetshenziswe esikhathini esingaphezu kwesisodwa.
Amakhukhi wezobuchwepheshe: lokhu kuvumela umsebenzisi ukuthi azulazule kuwebhusayithi noma kuhlelo lokusebenza futhi asebenzise izinketho ezahlukahlukene noma izinsizakalo lapho. Isibonelo, ngokulawulwa kwethrafikhi nokuxhumana kwedatha, ukukhomba iseshini, ukufinyelela izingxenye zeWebhu ezikhawulelwe, njll.
Ukwenza ngokwezifiso amakhukhi: lokhu kuvumela abasebenzisi ukufinyelela insizakalo ngezici ezithile ezichazwe ngaphambilini kusiginali sakho, noma izilungiselelo ezichazwe umsebenzisi. Isibonelo, ulimi, uhlobo lwesiphequluli othola ngalo insiza, ukwakheka kokuqukethwe okukhethiwe.
Amakhukhi wokuhlaziywa kwesitatimende: lokhu kuvumela ukuqapha nokuhlaziywa kokuziphatha komsebenzisi kumawebhusayithi. Imininingwane eqoqwe kulawo makhukhi isetshenziselwa ukukala umsebenzi wewebhu, uhlelo lokusebenza noma amasayithi epulatifomu kanye nokuphrinta kokuzulazula komsebenzisi kwalawa masayithi, ukuze kwenziwe ngcono insizakalo nokusebenza kwabasebenzisi.
Amakhukhi Eqembu Lesithathu: Kwamanye amakhasi e-web ungafaka amakhukhi avela eceleni akuvumela ukuphatha nokuthuthukisa amasevisi ahlinzekwayo. Isibonelo, izinsizakalo zezibalo ze-Google Analytics.
Ungavimba amakhukhi ngokwenza kusebenze ukulungiselelwa esipheqululini sakho okukuvumela ukuthi wenqabe ukusethwa kwawo wonke noma amanye amakhukhi. Kodwa-ke, uma usebenzisa izilungiselelo zesiphequluli sakho ukuvimba wonke amakhukhi (kufaka phakathi amakhukhi abalulekile) ungahle ungakwazi ukufinyelela konke noma izingxenye zesayithi lethu noma amanye amawebhusayithi owavakashelayo.
Ngaphandle kwamakhukhi abalulekile, wonke amakhukhi azophelelwa yisikhathi ngemuva kwesikhathi esithile.